I-Cascades Hotel - I-Sun City Indawo yokuhlala
Indawo yokuhlala e-Sun City yase- Cascades Hotel
Izivakashi zingakwazi ukuphumula endaweni enhle yehhotela laseCascades kule hotele yokunethezeka yokuhlala yaseSun City Resort.
Faka endaweni yokunethezeka ehlanjululweyo ye-Cascades Hotel suite. Indawo yokuhlala kule hotela yase-Sun City ingenye yezimakamelo ezingama-241 ezihambelana namakamelo ajwayelekile angu-97, amakamelo angama-39 aphezulu, amahhala angu-78 okunethezeka, amakamelo omndeni angu-78, ama-suites ayisithupha, ama-suites angu-6, ama-suites aphezulu, i-suite engadini kanye no-2 amakamelo angenaphutha.
Ukuthinta kahle kwesitayela nokunethezeka okunethezekile, kuhlangene nemibono yezitimu kanye nemikhumbi emhlophe yasogwini lolwandle oluza nazo zonke izindlu kuleli hotele laseSun City, lenze indawo yokuphumula incane kakhulu engamelana nayo.
Igumbi lababili elihle k
Amakhemikhali e-Luxury Twin e-Cascades Hotel e-Sun City Resort alala nabantu ababili emibhedeni emibili ene-en-suite yokugezela enezigaxa ezihlukene kanye nezinyathelo ezimbili ezingenalutho. Amakamelo ahamba phambili e-Twin ahamba ne-air conditioning, i-screen yesikrini se-screen eneziteshi zesathelayithi, i-laptop ephephile, izinwele zezinwele, i-minibar, idesksi, ucingo, itiye nekhofi, kanye nenkonzo yamahhala angu-24. Amakamelo anemibhedqo yobukhulu benkosi ayatholakala ngesicelo. Jabulela ukubukwa kwensimu kusuka e-Luxury Twin Room.
Igumbi lomndeni elihle kakhulu
Amakamelo Amakhasimende Okunethezeka Ehhotela laseCascades eSun City Resort inikeza imibono enhle nesithuba esanele sokuba wonke umndeni ujabulele. Amakamelo alala nabantu abangu-4, ebhedeni lobukhulu benkosi kanye nombhede wokulala. Indlu yekugezela en-suite ine-shower ehlukile, futhi ifakwe izinto zokunethezeka. Izinsiza zifaka umoya-moya, i-screen yesikrini se-flat eneziteshi zethelethilethi, indawo yetiyi kanye nekhofi, amakamelo angenalutho, i-laptop ephephile, izinwele zezinwele, i-minibar, idesksi kanye nenkonzo yamakamelo amahora angu-24. Amakamelo Amakhasimende Okunethezeka anezibhuku zokubhukuda nokubukwa kwendawo
Ikamelo Elihle Eliphezulu
Amakamelo Okunethezeka Aphezulu ehhotela laseCascades eSan City Resort avulekile, alala nabantu ababili endaweni yokulala enkosi ene-en-suite yokugeza ehlukene, izinyathelo ezimbili ezingenalutho nezinto zokunethezeka. Amakamelo Okunethezeka Aphezulu afaka indawo yokudlela ehlukile kanye nemibono yegalofu kanye nezintaba. Jabulela itiye ekamelweni eliphansi kanye nekhofi, noma uhlele okuthile kusuka enkonzweni yamahhala angu-24. Izinsiza zifaka umoya-moya, i-screen yesikrini se-screen eneziteshi ze-satellite, i-laptop ephephile nedeski lokubhala.
Igumbi elibhekane namanzi okubhukuda ne-golf. Amakamelo Okunethezeka Aphezulu alele abantu ababili embhedeni womkhulu wamakhosi anezindlu zokugezela ezinesitezi ezinezigelekeqe ezihlukene, izintambo ezimbili kanye nezinsiza zokunethezeka. Hlaziya induduzo emoyeni, futhi uhlele endaweni yokudlela egumbini ongayithokozela endaweni ehlukile yokudlela. Ikamelo linesitokisi se-screen, futhi itiye yayo nekhofi, i-laptop ephephile, i-hairdryer, i-minibar kanye nedeski.
Igumbi elihle lomndeni
Igumbi eliphezulu lomndeni elihle kakhulu e-Cascades Hotel eSun City yindawo enokuthula enombono okhangayo nezinsiza zokunethezeka. Igumbi lilala nabantu abayisishiyagalombili, benombhede womkhulu wenkosi kanye nombhede wokulala, futhi unesitsha sokugezela esine-en-suite esinezixazululo ezihlukene kanye nezinyathelo ezimbili zokungafani. Igumbi linendawo yokudlela ehlukene, i-minibar, i-hairdryer, iphephile ephathekayo, i-air-conditioning, i-TV yesikrini esenezitezi zesathelayithi, idesksi lokubhala, itiye nekhofi kanye nesevisi yamahhala angu-24.
Ouhlangene nokuhlala kwakho
Ukungena okungenamkhawulo mahhala ku-Valley of Waves
I-full English buffet kwasekuseni kuhlanganisiwe
Ukugcinwa kwansuku zonke
Isevisi yamakamelo (amahora angu-24)